မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် မှအကောင်းဆုံး မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ACME MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ဖြစ်ပါသည် မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကျော်နှင့်အတူ။ ငါတို့အားဖြင့်လုပ်သောထုတ်ကုန်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မားကြပြီးအစဉ်အမြဲအချိန်ပေါ်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ငါတို့အသစ်ဖောက်သည်ကိုဆွဲဆောင်ရန်လစဉ်လတိုင်းထုတ်ကုန်သစ်များရှိသည်။ ငါတို့သည်ဤလောကတစ်လျှောက်လုံး 300 ကျော်ဝယ်လက်မှဂုဏ်သတင်းကိုရပြီ။ customization ကြိုဆိုသည်။ ကျနော်တို့ထဲတွင်အကောင်းပို့ကုန်စံချိန်တင်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ကြ Taiwan နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခုချက်ချင်း။ ပိုသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမဆိုနှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးရှိကိုစောင့်မျှော်နေကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ဟာသင့်လျော်စျေးနှုန်းတွေ, အချိန်မှန်သင်္ဘောပို့ဆောင်မှုနှင့်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအားလုံးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ်။ သင်၌စိတ်ဝင်စားလျှင်
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ရန်တုံ့ဆိုင်းမနေပါနဲ့ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုစောင့်မျှော်။
ပုံစံ - AM-OHDP
လွန်ခဲ့သောအနှစ်သုံးဆယ်က,လူတိုင်းရေအများကြီးစားသုံးကြောင်းရှည်လျားပုံသဏ္dာန်ဆေးဆိုးစက်ကိုအသုံးပြုနေတုန်း,ကျနော်တို့ကပို။ ရေကိုဖွင့်အတွက် ဦး ဆောင်ယူခဲ့သည်-အခြားဥရောပစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်ပတ်ပတ်လည်ပုံသဏ္dာန်ဆေးဆိုးစက်ကိုချွေတာသည်,ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီပတ်ပတ်လည်ပုံသဏ္dာန်ဆေးဆိုးစက်၏ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ကြသည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AM အနည်းငယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော-OHD ဆေးဆိုးစက်သည်ဆေးဆေးပြွန်၏အဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့အားထိုးကျက်စက်ကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်,ဆိုးဆေးနှင့်ဆိုးဆေးစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်ရှောင်ရှားရန်အခန်းများသို့စနစ်တကျကျဆင်းသွားစေရန်သေချာစေရန်,ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခန်းတစ်ခုစီ၏စွမ်းရည်ကို ၂၅၀ ကီလိုဂရမ်အထိတိုးမြှင့်နိုင်ရန်ဆေးဆိုးသည့်အခန်းကိုတိုးချဲ့သည်.
ဒီမော်ဒယ်အကြောင်းကို 1 ၏အလွန်နိမ့်အရက်အချိုးအစားရှိပါတယ်:4~5.ရိုးရာရှည်လျားသောပြွန်ဆေးဆိုးစက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်,၎င်းသည်ရေသုံးစွဲမှုကိုများစွာလျှော့ချနိုင်သည်,ရေနွေးငွေ့အသံအတိုးအကျယ်,စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,အရန်အသုံးပြုမှု,ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်ရေဆိုးကုသမှုပမာဏ.ဒါဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေဆေးဆိုးစက်ဖြစ်ပါတယ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.dyeing-machine.com/my/high-temperature-rapid-dyeing-machine-5.html
110&ထုံးစံအတိုင်း;Flow Rapid ဆိုးဆေးစက်ကျော် အသွင်အပြင် MAX.အလုပ်လုပ်အပူချိန် 110̊ဂ:နိုင်လွန်အထည်ဆေးဆိုးခြင်းအတွက်ကောင်းသော,၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်သောသုတ်ဆေးအရောင်ချွတ်သည့်ထိရောက်မှုနှင့်ချည်ပိတ်ထည်များပြုပြင်ခြင်းအချိန်ကိုသက်သာစေသည်. အလွန်နိမ့်အရက်အချိုး 1:4~7,၎င်းသည်ဆိုးဆေးအသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းစေသည်,ဓာတုပစ္စည်း,စွမ်းအင်,ရေ&effluent ကုသမှု၏ကုန်ကျစရိတ်. အထူးဆိုးဆေးပြွန်နှင့် nozzle တည်ဆောက်မှုတို့သည်အထည်ထိတွေ့မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်&တွန့အမှတ်အသားများဖယ်ရှားပစ်.အပြည့်အဝလျှံ nozzle pilling သေချာ-ပိတ်ထည်နည်းသည်. ဒါကြောင့်ပျော့ပျောင်းသောစီးဆင်းမှုဆိုးဆေးစနစ်ကထွက်ခွာသောအခါထည်ဆိုးဆေးပြွန်ထဲမှာဖြန့်သည်&မည်သည့် plaitdown ယန္တရားမရှိဘဲဆေးဆိုးခန်းထဲသို့ချောချောမွေ့မွေ့ drop.ယင်းကြောင့်စက္ကူလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သော်လည်းပုံမှန်မဟုတ်သောစည်များကိုဆေးဆိုးသည့်အခန်းတွင်သိုလှောင်ထားသည်.ဤသည်ကိုလည်းတွန့်အမှတ်အသားများကနေတားဆီး. အခန်းတစ်ခုစီအတွက်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဝန်စွမ်းရည်သည်အခန်းတစ်ခုစီတွင်ရှည်လျားသောထည်အရှည်ကိုကာကွယ်ပေးသည်,ထည်သံသရာအချိန် minimize.လေးလံသောစုပ်စက်သည်ဆိုးဆေးများကိုအလွန်မြင့်မားသော pump pump ဖြင့်ပို့ပေးသည်.ဒီအင်္ဂါကအထည်နှင့်အတူဆိုးဆေးအရက်၏မြင့်မားသောဖလှယ်သေချာ,အရှင်ယူနီဖောင်းဆိုးဆေးအောင်မြင်ခဲ့သည်. နှစ် ဦး စလုံးလက်စွဲစာအုပ်&အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်,အလိုအလျောက်နှိုးဆော်,dilution&သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းဆိုးဆေးများသို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းများအားအစာကျွေးခြင်း,တဖြည်းဖြည်းသို့မဟုတ် degressively.ဤသည်အော်ပရေတာအမှားလျှော့ချရန်ကူညီသည်&ဆိုးဆေးတစ်ပုံစံတည်းတိုးတက်အောင်. အထူးလျှံလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းစနစ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဝတ်လျှော်မှုနှင့်ရေသုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်,အဝတ်လျှော်အချိန်ကိုလည်းလျှော့ချ. အဓိကပိတ်ထည်များနှင့်တင်းမာမှုနိမ့်စောင်ရေများ၏တားဆီးကာကွယ်တားဆီးဖို့အပြည့်အဝလျှံ nozzle နှင့်အတူတပ်ဆင်ထား lycra ပိတ်ထည်၏အကောင်းဆုံး elasticity ရရှိ. အခြားထူးခြားချက်များ နေရာလိုအပ်ချက်သိမ်းဆည်းပါ. စက်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည်ပုတီးစေ့များကိုပေါက်ကွဲစေသည်,စက်၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်သည်ပိတ်ထည်များကိုပိတ်ဆို့ရန်ဆေးကြောထားသောမှန်တစ်ခုရှိသည်. အပိုထည့်သည့်တိုင်ကီ၏သွယ်ဝိုက်ရောစပ်ပေးခြင်းသည်အထိခိုက်မခံသောဆိုးဆေးပစ္စည်းများကိုခဲခြင်းမှရှောင်ရှားသည်. အခန်းတိုင်းရှိ Teflon စာရွက်သည်အထည်များကိုချောမွေ့စွာရွေ့လျားစေသည်&ဆေးပြားကိုရှောင်. microprocessor နှင့် temperature controller နှစ်ခုလုံးတပ်ဆင်ထားသောစက်များကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်သို့မဟုတ် Semiutomatic ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်. အမှန်တကယ်ထည်လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်လည်ပတ်နှုန်းတစ်ပြိုင်နက်ပြသရန်ချုပ်ရိုး detector.ချုပ်ရိုးကိုလည်းအလိုအလျှောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အကောင်းဆုံး မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်
ကျော် Flow ပုံမှန်ဖိအား Rapid ဆိုးဆေးစက် optional ကို ရွေးချယ်မှုအထူးအထူးကိရိယာများ အမှန်တကယ်ထည်ပြေးမြန်နှုန်းကိုပြသနိုင်ဖို့ချုပ်ရိုး detector.နှင့်တော်လှန်ရေးနှုန်းသံသရာအချိန်အဖြစ်အလိုအလျောက်ချုပ်ရိုးကိုရှာဖွေတာ. တိကျစွာရေအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. linearly အားဖြင့်ဓာတုကျွေးမွေးဖို့ Programmable ဆေးထိုးစနစ်,တိုးလာသို့မဟုတ် decrely. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ